DHAGEYSI XASAASI AH+DAAWO: Senator Faroole oo ka hadlay cidda ay la kulmayaan maalmaha ay Joogaan PL & Ujeedada socdaalkooda. – Puntlandtimes
DHAGEYSI XASAASI AH+DAAWO: Senator Faroole oo ka hadlay cidda ay la kulmayaan maalmaha ay Joogaan PL & Ujeedada socdaalkooda.
GAROOWE(P-TIMES)- Guddi Xaqiiqo raadin ah oo ka socda Aqalka Sare ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Garoowe ee caasumada Puntland, waxaana kusoo dhaweeyey madaarka Garoowe gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole.
Xubnahan oo ka kooban 11 xubnood ayaa ujeedadoodu tahay sidii ay ula kulmi lahaayeen Madaxda dawladda Puntland, Bulshada rayidka ah, Isimadda dhaqanka iyo dhamaan laamaha dawladda oo ay kala hadlayaan sidii loo soo afjari lahaa khiaafka kala dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha guddiga Cabdiraxmaan Faroole oo ka hadlayey meelaha ay tagayaan iyo cida ay la kulmayaan, wuxuu sheegay in ay arki doonaan Madaxweynaha, kuxigeenkiisa, Golayaasha dawladda, bulshada rayidka ah ee Puntland, sidaas oo kalena ay la kulmi doonaan Xaafiiska QM u qaabilsan Siyaasadda ee Puntland.
HALKAN RIIX SI AAD U DHAGEYSATO FAAHFAAHINTA